Iimboniselo zechweba ukusuka kwiBalcony kunye nendawo yesitrato esiphakamileyo - I-Airbnb
Iimboniselo zechweba ukusuka kwiBalcony kunye nendawo yesitrato esiphakamileyo
Copperhouse, England, United Kingdom
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChris & Rachel
Ithuba lokuqesha indawo ekhethekileyo yamabali ama-2 anomlinganiswa onomtsalane. Indlu yomgangatho wesibini ineembono zeEstuary ngasemva, apho unokujonga khona indawo enoxolo nezolileyo yeHayle Estuary reserve kwibalcony. Ngokufikelela kwisitrato esiphezulu esikhulayo ngaphambili.Igumbi lokutyela lasekhitshini libonelela ngendawo eninzi yokutyela kunye nendawo eyomileyo yesofa yokuphumla ngombono. Amagumbi okulala ama-3, amagumbi amabini aphindwe kabini kunye ne-1 yokukhupha ibhedi yesofa kwigumbi eliphezulu. Ipropathi yi-15/20 imizuzu yokuhamba ukusuka e-mexico towans beach.
Ipropathi ikwiMgangatho wokuQala ke ngoko ukufikelela kudlula amanyathelo kuphela, oku kunika umbono omangalisayo wePool yeCopperhouse (iEstuary yaseHayle) ukusuka kwibalcony ngasemva. Inendawo yokuhlala yeeNdwendwe ezi-6. Le ndawo incinci kakhulu kubantu abadala aba-6/3 izibini, nangona kunjalo silushiyile ukhetho olukhoyo ngokungathi lusapho lwaba-6 okanye ulutsha oluhlala nosapho olu lufanelekile. Nceda usithumelele umyalezo ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
I-WIFI yasimahla kuyo yonke indawo. kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngazo zonke izinto eziyimfuneko oza kuzifuna ngokuhlala kwakho. Kukho indawo yokutyela ekhitshini ende enendawo enkulu yetafile yokutya kunye nokuzonwabisa. Kunye nesofa entle ephumlayo kwindawo ekugqibeleni yokuphumla. Amagumbi okulala anegumbi elinye eline-Ensuite ephindwe kabini kumgangatho wokuqala kunye nefestile ejonge kwisitrato esiphakamileyo (inokuba ngxola kancinci ngoMgqibelo nangeCawa njengoko ijonge kwi-pub yethu yasekhaya). amanye amagumbi amabini akumgangatho ophezulu afikeleleka kwizinyuko ezincinci ezijikajikayo. Kukho igumbi eliphindwe kabini elijonge kwichweba elinebalcony yeJuliet ejonge kwiEstuary kunye negumbi lokuhlambela elithi 'Jack kunye neJill' eliqhagamshelwe/ekwabelwana ngalo lelinye igumbi elinamawele elinebhedi enye/yewele, Eli linesilingi enomtha ophantsi. umlinganiswa kodwa ukuphakama kwentloko encinci, ilungele abantwana okanye abafikisayo!
Ibhalkhoni ehonjisiweyo ejonge kwichweba lechweba inelanga ubusuku bonke sisidlo sangokuhlwa esithandekayo okanye indawo yokuphumla yangokuhlwa (sinabamelwane abathandekayo kodwa abasele bekhulile ke qaphela ukuba le asiyondawo yepati okanye umculo kwibalcony!) . Kukho iiBathroom ezi-2 kwipropathi, ezi zombini zifikeleleka kumagumbi. Enye yi-jack kunye ne-jill en-suite phezulu enye yi-en-suite kwi-master bedroom esezantsi. Indlu Ilungele usapho okanye iqela elincinci lidibane. Amaqela abantu abadala aba-6 azakucudiswa ukuze oku kubhukishwa kurhoxiswe okanye kungamkelwa.
50" HDTV ene-I-Netflix, I-Roku
Ipropathi ibekwe ngokukodwa eHayle, esinye isiphelo sepropathi sijonge kwisitrato esixakekileyo saseHayle esinokufikelela kwangoko kwii-pubs kunye neevenkile, kwaye esinye isiphelo sepropathi sinembono ezolileyo phezu kwechweba kunye ne-15/20 umgama wokuhamba ngemizuzu ukuya. Iimayile ezi-5 zesanti yegolide, ulwandle lwaseGwithian. Ulwandle lubonelela ngeehambo ezimangalisayo, i-surf enkulu kunye nommandla omkhulu weentsapho ukonwabela indawo elunxwemeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Chris & Rachel
Sihlala kumgangatho ophantsi weflethi kwaye siqhuba ivenkile yekofu kwisitrato esiPhezulu ngoko siya kufumaneka kakhulu ngexesha lokuhlala kwakho.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$248
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Copperhouse